Education Archives - ရန်ကုန်ခေတ်သစ် မီဒီယာ
All News Education Health interview
November 17, 2020 86
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းမှာ အခြေခံပညာကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရမှု စာသင်နှစ်တစ်နှစ် အောက်ရတော့မလား By ရန်ကုန်ခေတ်သစ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းစတင်ရိုက်ခတ်သည့် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး အခြေခံပညာကျောင်းများ ရပ်နားလိုက်ပြီး ယခုအချိန်အထိလည်း ကိုဗစ်လူနာ အရေအတွက်မှာ နေ့စဉ် တစ်ထောင်ကျော် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကူးစက်ခံနေရသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်လူနာ ၇၀၁၆၁ ဦး နှင့်သေဆုံး ၁၅၉၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
July 28, 2020 127
အယ်ဒီတာ့အာဘော် မီဒီယာသည် တပ်မတော်ကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ရန် အကြောင်းမရှိပါ၊ ရန်သူကဲ့သို့ ဆက်ဆံ သဘောထားမှု ပြောင်းလဲသင့်သည် သတင်းမီဒီယာများသည် တပ်မတော်ကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်နေသည်ဟု တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်း၏ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
May 19, 2020 185
အထက်တန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးမှ မူလတန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် တင်ပြမှု အလေးအနက်စဉ်းစားမည်ဟု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပြော၊ အစောဆုံး ဇူလိုင် ပထမပတ်တွင် ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင် ရန်ကုန်၊ မေ ၁၉ ကိုဗစ်ကာလ အခြေခံပညာကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင် အထက်တန်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးမှ မူလတန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် တင်ပြမှု ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
February 3, 2020 215
အခြေခံပညာကျောင်းများ မတ်လကုန်အထိဖွင့်မည့် ဝန်ကြီးဆုံးဖြတ်ချက် အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပြောင်းလဲလိုက်ရ (ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ဖေဖော်ဝါရီ ၃ အခြေခံပညာကျောင်းစာမေးပွဲများကို မတ်လကုန်တွင် စစ်ပြီး မတ်လကုန်အထိ ကျောင်းဖွင့်မည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၏ အမိန့်သည် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တေ့ွဆုံပြီးနောက် ပြောင်းလဲလိုက်ရပြီဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
January 30, 2020 233
ပါမောက္ခချုပ်ကို အငြိမ်းစားပေးသော်လည်း သမ္မတရုံးညွှန်ကြားချက်မလိုက်နာသည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပါ အရေးယူပေးရန် တောင်းဆို ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်ကို မလိုက်နာဘဲ မန္တလေးတက္ကသိုလ် Food Court တည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသီတာဝင်းကို အငြိမ်းစားပေးခဲ့ပြီးနောက် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားချက် မလိုက်နာသည့် ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
January 29, 2020 263
မန္တလေးတက္ကသိုလ်Food Court တည်ဆောက်ရာတွင် သမ္မတရုံးညွှန်ကြားချက်မလိုက်နာ၍ ပါမောက္ခချုပ်ကို အငြိမ်းစားပေး ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉ မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် Food Court တည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး က ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွ်ခဲ့သည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာသီတာဝင်း ကို အငြိမ်းစားပေးလိုက်ကြောင်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
January 28, 2020 199
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်တဲ့ နေပြည်တော်အခမ်းအနားပွဲမှာ ကျောင်းသားတွေ ဘာလို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြလဲ(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈ နေပြည်တော် MICC2ခန်းမတွင် ယနေ့ ပြုလုပ်နေသည့် ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောပွဲ၌နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောနေသည့်အချိန် ကျောင်းသားများဆန္ဒထုတ်ခဲ့ကြောင်း ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Education interview Web TV
January 27, 2020 211
“မန္တလေးကျောင်းသားသပိတ်နှင့် မတ်လအထိ ကျောင်းဖွင့်ရေး ကိစ္စ စားပွဲဝိုင်းတွင် မဆွေးနွေးလျှင် အစိုးရနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ဖြစ်လာမည်ဟု ဗကသ သတိပေး” ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသက်မောင်မောင်နှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
January 24, 2020 373
မတ်လအကုန်အထိ ကျောင်းဖွင့်လှစ်မှု ဆန့်ကျင်သော သပိတ်ကျယ်ပြန့်လာနေ၊ မီးတုတ်…. မီးတုတ်… ရှို့…ရှို့၊ မျိုးသိမ်း…. မျိုးသိမ်း…… အို့…… အို့ ဟု ကြွေးကြော်(ရုပ်/သံ) ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ မတ်လအထိ စာသင်ကာလတိုးမြှင့်သတ်မှတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကွေး ၊ ပခုက္ကူ၊ မန္တလေး၊ မုံရွာနဲ့ မိတ္ထီလာ ပညာရေးကောလိပ်တွေက ကျောင်းသား/ကျောင်သူတွေဟာ လမ်းလျှောက်ပြီး ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
January 21, 2020 169
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် အရေးယူပေးရေး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လက်မှတ်၉၀၀ ကျော်ကောက်ခံပြီး သမ္မတထံတင်ပြမည် ရန်ကုန်၊ဇန်န်ဝါရီ ၂၁ မန္တလေးတက္ကသိုလ်တွင် ဥပဒေနှင့်မညီဘဲ Food Court တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့သည့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ကို အရေးယူပေးရေးအတွက် မန္တလေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားကျောင်းသူများထံမှ လက်မှတ်၉၀၀ကျော်ကောက်ခံရရှိယူပြီး သမ္မတထံတင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်